Suuqa Ganacsiga Jiriqaaga Ee Weyn! – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Suuqa Ganacsiga Jiriqaaga Ee Weyn!
Magaalo ku taalla dalka shiinaha oo lagu magacaabo Siddiyani ayaa go’aansatay inay ku samayso horumarin Jiriqaaga ku nool beerahooda. Ka dib markii uu dagaalka Jiriqaagu noqday mid aad loo xiiseeyo oo dhaqaale badan ka soo xeroodo.
Jiriqaaga aya qiimihusu gaadhay $ 7660, dagaalka Jiriqaagu waa mid dhaqan ahaan usoo jiray mudo fog. Waxaana sidaa loo samayn jiray iyadoo beeraha uu ku batay Jiriqaagu.
Maalqabeenada Shiinaha ayaa aad u jecel nooca Jiriuqaaga ee magaladasi ku nool oo ah mid xoog badan oo si fudud uga adkaada tartanada dagaalka jiriqaaga . Wakhtiyada Guga iyo Xagaaga magaaladan 80% gacanacsigeedu waa Jiriqaaga. Magaalada Sidiyani waa goobta ganacsiga Jiriqaaga ee ugu weyn waqooyiga Shiinaha waxaana uu gaadha qiimaha jiriqaaga qaarkood wakhtigaasi $ 15300.